Narendra Moodi R/W dalka India oo booqasho lama filaan ah ku tagey dalka Pakistan. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Narendra Moodi R/W dalka India oo booqasho lama filaan ah ku tagey...
Narendra Moodi R/W dalka India oo booqasho lama filaan ah ku tagey dalka Pakistan.
Ra’iisul wasaaraha dalka India, Narendra Modi ayaa maanta booqasho lama filaan ah ku tagay waddanka Pakistan oo dalkiisa uu kala dhexeeyo khilaaf siyaasadeed oo muddo fog soo jiray.
Booqashadan oo noqonaysa tii ugu horreysay oo ra’iisul wasaare Hindi ah uu ku tago dalka Pakistan muddo 10-sano ka badan, iyadoo lagu wado in Jimaha maanta ah gellinka dambe uu la kulmo magaalada Lahore ra’iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Shariif.
Narendra Modi ayaa sii maray dalka Afgaanistan, ka hor intii uusan tegin dalka Pakistan, isagoo sheegay in socdaalkiisa uu qayb ka yahay sidii horay loogu sii wadi lahaa nabadda gobolka.
Labada mas’uul ayaa markii ugu horreysay dib u soo celiyay xiriirkooda dhanka siyaasada ee labada Dal, kaddib kulan gaar ah oo ay ku yeesheen xarunta dalka Faransiiska ee Paris laba toddobaad ka hor, xilligaas oo ay labadooduba ka qayb-galayeen shirkii caalamiga ah ee cimilada adduunka.
Xiriirka siyaasadeed ee labada dal ee dariska ah oo haysta hubka khatarta ah ee Nuclear-ka ah ayaan wanaagsanayn tan iyo markii dalka Pakistan uu ka go’ay dalka Hindiya sannadkii 1947-kii, markaasoo Pakistan ay ku dhawaaqday inay tahay dowlad madax-bannaan.
Sidoo kale, labada dal ayaa waxaa horay u dhexmaray saddex dagaal oo ay laba ka mid ah ka dhasheen muranka lahaanshaha gobolka Kashmiir oo qaybo ay labada waddan uu midba qayb ka maamulo, taasoo ka mid ah arrinta khlaafka siyaasadeed ee Hindiya iyo Bakistaan dhexeeya udub-dhexaadka u ah.
RW Hindiya, Modi ayaa hadal uu ka jeediyay Jimcaha maanta ah baarlamaanka waddanka Afgaanistaan ayaa wuxuu ku baaqay in dalalka gobolka – sida; Pakistan, Afgaanistaan iyo Hindiya ay iskaashadaan si loo xoojiyo horumarka ka socda Afgaanistaan.
Ugu dambeyn, Narendra Modi ayaa xusay in guul uu gaaro dalka Afgaanistaan ay ku xiran tahay taageerada waddamada dariska la ah; kuwaasoo ay ka mid yihiin India iyo Pakistan. Waxaase horay gacan uga geystay in dalka Afgaanitaan ay ka hirgasho dowlad awood ah dalalka Iiraan iyo dalal kale, kuwaasoo sidoo kale gacan ka geystay la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah ee ka dagaallama waddanka Afgaanistan.
Previous articleGobolka SH/dhexe maamulkiisa oo mamnuucid ku soo rogey indha shareerka haweenku xidhaan.
Next articleNAKADSA; Naadiga lagu magacaabo oo qabtey dood ku saabsan mideynta awooda dhalinyarada.